Macluumaadka baaritaanka ee la cusbooneysiiyay - princetoncovid.org
Macluumaadka imtixaanka la cusbooneysiiyay
Xirmooyinka tijaabada ee guriga-bilaashka ah ee COVID-19 ayaa loo heli karaa deggeneyaasha Degmada ee Mercer da'da 14 iyo ka weyn. Diiwaangelinta khadka tooska ah ayaa loo baahan yahay. Email HomeTesting@mercercounty.org su'aalo.
Deganayaasha Princeton ee doonaya baaritaanka COVID ee ilmaha da'doodu ka yar tahay 14 sano waxaa lagula talinayaa inay ka hubiyaan dhakhtarkooda carruurta.
Intaa waxaa dheer, Farmashiyaha Isku-dhafan ee Santé at 200 Nassau Street waxay bixisaa bilaash COVID-19 tijaabada 10 subaxnimo ilaa 2 galabnimo Isniinta ilaa Khamiista. Riix halkan inuu isdiiwaangaliyo. Caawinta waxaa lagu heli karaa Ingiriis iyo Isbaanish adoo wacaya (609) 921-8820.